Imikhiqizo Ehlobene neZinyosi njengoMuthi
Bee-related Products as Medicine
I-apitherapy iyisetshenziswa semikhiqizo yezinyosi zokwelapha nokuvimbela izifo. Ngokusho kwe-American Apitherapy Society, le mikhiqizo ehlobene nezinyosi ihlanganisa uju, impova, i-propolis, i-royal jelly nesihhlungu sezinyosi.
Impova njengeSelekelo Sabantu
Ukusetshenziswa kwe-pollen njengengxenye yokuthola impilo yabantu ngisho nangenhloso yokwelapha kuyinkinga. Impova yezinyosi ezitholakalayo ezitolo zokudla ezempilo iqoqwa umlimi wezinyosi onogwaja we-pollen. Lokhu kuphazamisa impova emilenzeni yezinyosi njengoba izinyosi zingena esidlekeni. Ngakho-ke, ukunciphisa impova ekhona ukuze izinyosi zidle izingane zabo.
Ucwaningo oluthile lwenziwa ekwenzeni okunomsoco we-pollen eluhlaza ukuze isetshenziswe ekudleni kwabantu/nokudla okunomsoco, kodwa impova isetshenziselwa kakhulu izici zokwelashwa ezifana nokulwa nokulwa nokulwa ne-anticancer. Izifundo zaseTurkey (i-in vitro) zibonise izinyosi zezinyosi ukuze zibe nomsebenzi wokulwa ne-antibacterial ongenza ngcono ukumelana nokutheleleka.
I-United States's Food and Drug Administration (FDA) ithi 'impova ayiwona umthombo ocebile kakhulu weprotheyini eyaziwa yisayensi. I-pollen enkulu ye-pollen i-carbohydrate (ngaphezu kuka-60%), hhayi amaprotheni - ahluka ngokusho komthombo wempova.'
Inani lokudla okunomsoco we-impova livame ukuhlolwa ngamaprotheni alo kanye nama-amino acids abalulekile. Ezinye izinhlobo zempova zingase zibe nezondlo kakhulu, kanti ezinye zingaphansi kakhulu. I-Apis Information Resource Center ithi 'uma kuqhathaniswa nama-supplements afana namathebulethi e-vithamini/amaminerali, impova iqukethe amazinga aphansi kakhulu kulawa micronutrients kunezakhi zokwengeza, (futhi) akufanele ithathe indawo yokudla okuhle nemikhuba yezempilo.
Ukungcola okungenzeka kwamapoleni ngezinsimbi ezinamandla noma izibulala-zinambuzane kungaba esinye isikhathazo kubantu abathengi impova nemikhiqizo ehlobene nempova.
Isinkwa Sezinyosi njengeSelekelo Sabantu
Isinkwa sezinyosi sakhiwa izinyosi usebenzisa impova, i-nectar, i-enzyme yokugaya nokuju. Uxube lubekwa uphawu esitokisini ukuze luvutshe. Inqubo yokuvutshelwa iphula amaprotheni kanye nama-starches futhi yenza amavithamini amaningi abekhona. I-'esinkwa isinkwa 'esiphumela ihlinzekwa izibungu nezinyosi ezincane njenge-feed enoprotheni ecebile. Isinkwa sezinyosi sinomthelela ohlukile (futhi ngaphezulu) wokudla okunomsoco uma kuqhathaniswa nempova eluhlaza futhi kunomzimba womuntu ongcono.
Ngo-400 BC uHippocrates, udokotela waseGrisi wasendulo, waqinisekisa izinzuzo ze-bexisi ukuze kutholakale izifo zesikhumba. I-bexisi isetshenziselwa kakhulu emithi yesimanje. Efihliwe ngesimo sezinyosi zezinyosi ezincane ezisebenzayo, i-bexisi isetshenziselwa ukugqoka imithi futhi isetshenziswe, isibonelo, esikhwameni sesikhumba, amasobho, emakhoneni omsindo, ekuhlinzeni kwamazinyo nakwe-sutures ukulawula ukuphuma kwegazi ngesikhathi sokuhlinzwa kwethambo.
I-Royal Jelly - Inhle noma Imbi?
I-Royal jelly iyimfihlo yokunamathisela emhlophe ephuma 'emilonyeni yezinyosi' zezinyosi futhi isondliwa izibungu nezinyosikazikazi.
Ukusetshenziswa okuyinhloko kokusetshenziswa kwe-jelly yasebukhosini kuyizimonyo kodwa kusetshenziselwa ukwesekwa kokudla. I-jelly yase Royal ingathengiswa esisha, ixutshwe neminye imikhiqizo enjenge-yoghurt noma efakwe efrijini.
Iphunga elimnandi, ukunambitheka okumuncu nokuhambisana kokunamathisela okunomsoco. Ngokusekelwe isikhathi eside nokuzala kwezinyosi zezintambokazi, kucatshangelwa ukuthi i-royal jelly ingaba nezinto ezizuzisa abantu. Lokhu kucabanga kungahle kuqinisekiswe, naphezu kwezifundo eziningi zocwaningo.
Ucwaningo oluningi lwemiphumela ye-jelly yobukhosi kubantu lwenziwa, ikakhulukazi eMpumalanga Yurophu, kodwa izifundo eziningi kunzima ukuzihlola ngenani lezesayensi lemiphumela.
Kodwa-ke, ukuhlolwa kweJapane kwabonisa ukubekezelelana kwe-glucose nokuthuthukiswa kwengqondo nokunyuka ekwenzeni amaseli abomvu egazi. Ucwaningo lwe-in vitro lithole ukuthi i-royal jelly inomsebenzi we-antibiotic kodwa lokhu kwehla ngesitoreji esingalungile noma sesikhathi eside.
I-Propolis iyinhlangano 'yezinyosi' ezinamathele ezakhiwa izinyosi ezivela ezihlahleni zemithi futhi zisetshenziselwa ngaphakathi kwe-beehive ukuze zibhebhetheke ngaphakathi kwe-hive, ukuphazamiseka kwamanqina nokushaya inzalo. Eyaziwa nangokuthi 'i-penicillin yaseRussia', i-propolis isetshenziswa emazweni amaningi lapho ama-antibiotic ayatholakali khona. I-antioxidant, antibacterial, i-antiviral, anti-fungal, anti-tumor kanye nezakhiwo eziphikisayo. Isetshenziselwa ukuvimbela ukutheleleka kwamagundane, ukuphulukisa izilonda zomlomo nomuthi, ukuvuselela izicubu zomzimba, ukunciphisa ukuvuvukala ngaphakathi kwemithanjeni nokuphatha izilonda, ngokusho kwezifundo zasePoland naseJalimane. I-propolis isetshenziselwa ukuphulukisa umbhede-izilonda kanye namakhemikhali, ukushisa nokushisa kwemisebe.
Isihlungu Sezinyosi Njengomuthi
Inyosi ye-honey isicwebe esicacile, esingabalabala esiqukethe amaprotheni okwenza ukuvuvukala kwendawo nokwenza njengegazi elincane.
Esetshenziswa amakhulu eminyaka, iyathandwa kakhulu eChina naseMpumalanga Yurophu namuhla lapho isetshenziselwa ikakhulu izifo ezingapheli zokuvuvukala. Ingafakwa noma isetshenziswe njengekhilimu ukunciphisa ukuvuvukala kwezifo ezinjenge-arthritis, multiple sclerosis (MS), ubuhlungu obuphansi emuva kanye ne-tennis elbow.
Inyosi ye-bee ikhishwa ngokudlulisa umthamo kagesi ngendwangu engena ngaphakathi kwenyoma. Lokhu kuphazamisa izinyosi, okubangela ukuba iqhube imifino, lapho i-venom iqoqwa khona. Izinyosi azilimazi kule nqubo.
Ngicela uqaphele: Ukwaziswa kungenxa yezemfundo nolwazi kuphela futhi angeke kuthathwe njengeseluleko sezokwelapha. Ulwazi aluhloselwe ukufaka iseluleko sezokwelapha noma ukwelashwa okunikezwa ochwepheshe bezempilo.